Ka shaqaynta FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
La talinta xiriirka shaqada ee dadka waddanka u soo guureyLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Ka shaqaynta wadanka Finland dhexdiisaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Fiidiyow ka hadlaya xuquuqda shaqaalaha ee FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Shuruudaha xiriirka shaqada iyo mushaarka Finland iyo Waxyaabaha heshiiska shaqadu ka koobanyahay .
Bandhig-qoraaleedyada sharciyada shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Qof kasta oo shaqaale ah wuxuu xaq u leeyahay sinnaan iyo takoor la’aan markuu shaqa dalbanayo iyo markuu shaqaynayaba. Wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir bogga InfoFinlandi ee Sinnaanta iyo fursadaha siman ee nolosha shaqada .
Sida uu qabo sharciga fasaxa sannadku, shaqaalaha jooga Finland wuxuu xaq u leeyahay fasaxa sannadka ama magdhowga fasaxa. Ka akhri xuquuqdaada fasaxa sannadka iyo mushaarka fasaxa sannadka bogga InfoFinland Fasaxa sannadka .
Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Ururada shaqaalaha .
Shaqa-bixiyaha waxaa waajib ka saaran inuu ka taxadaro nabadgalyada shaqaalihiisa. Maamulka badbaadada shaqaalaha waxay ilaaliyaan, in goobta shaqada laga ilaaliyo loogana dhaqmo tusmooyinka sharciga badbaadada shaqaalaha. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha .
Markii uu shaqa la’aan noqdo qof si joogto ah u degan Finland, wuxuu xaq u leeyahay inuu helo gargaarka shaqo la’aanta (nooc cayr). Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Gargaarka shaqo la’aanta .
Qof dalka u soo guurey, oo mudo dheer oo ku filan Finland deganaa, wuxuu lacagta hawlgabka ku heli karaa da’diisa oo weyn ama awood la’aan shaqo awgeed. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Howlgab .
Haddii aad Finland gudeheeda ka shaqaynaysid, waa inaad bixisaa canshuur. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Canshuurta .
Shaqa-bixiye kasta waxaa waajib ku ah inuu shaqaalihiisa oo dhan u qaban-qaabiyo daryeel xagga caafimaadka oo ka hortag ah. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Daryeelka caafimaadka shaqaalaha .
Markii qoyska ilmo u dhashaan, hooyada ama aabaha wuxuu sharcigu u ogal yahay inay fasax waalid qaataan oo ilmaha guriga ku xanaaneeyaan. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Fasaxyada qoyska .
Markii heshiiska shaqadu uu dhamaado, qofka shaqaalaha ahi wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqo-bixiyaha ka helo warbixin-shakhsiyadeed shaqo oo qoraal ah. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Warbixin-shakhsiyadeedka shaqada .